Homeराष्ट्रिय खबरमनसुन सक्रिय बनेसँगै बाढी–पहिरोको खतराः कस्तो छ तयारी ?
सुजन पन्त,काठमाडौं । वि.सं. २०७१ साल साउन १७ गते सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको पहिरोमा परी १५६ जनाले अनाहकमा ज्यान गुमाए । २७ घाइते भए भने ४३६ जना विस्थापित भए । त्यतिबेला जुरेमा कसैले सोच्दै नसोचेको पहिरो गयो । विभिन्न समयमा भिरालो जमिनबाट अलिअलि गरेर माटो खस्न गरेको सर्वसाधारणहरुलाई पहिला नै थाहा थियो । तर रातको समयमा एक्कासी गएको पहिरोले त्यहाँको बासिन्दालाई ऐय्या पनि भन्न नपाउने गरी यो संसारबाट चुँडेर लग्यो । माटो खस्ने गरेको थाहा पाएका जुरेवासी पहिले नै सचेत हुनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । समयमा ध्यान नदिँदा नै त्यहाँ ठूलो दुर्घटना भयो ।
वर्षा सुरु भएसँगै तराईमा बाढी, डुबान र हिमाल तथा पहाडमा पहिरोको जोखिम बढेको छ । बाढी, डुबान र पहिरोलगायतका जोखिमका कारण बर्सेनी ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । यो वर्ष पनि वर्षा लागेसँगै ठाउँ–ठाउँमा बाढी, डुबान र पहिरोको समस्या देखिन थालेको छ । गत मंगलबार मात्रै पाल्पाको तानसेन नगरपालिका–११ बन्दीपोखरास्थित सम्मोबारीमा गएको पहिरोमा पुरिएर तीन जनाको मृ त्यु भयो ।
५. विपत्तिमा काम गर्ने निकायबीच समन्वय हुनुपर्छ ।-रातोपाटीबाट
Prix Cialis Prix cialis without prescription